कोभिड प्रभावित व्यवसायी उकास्न गण्डकीमा जीवन रक्षा कोषलाई निरन्तरता दिइने - Pokhara Post
बैंकिङ कसुर मुद्धामा फरार रहेका पोखरा-६ का ४२ बर्षीय खेमराज पौडेल पक्राउ
संस्थागत बिस्तार गर्दै प्रदेश एक र दुईमा फोटोग्राफर महासंघ नेपाल
कोभिड प्रभावित व्यवसायी उकास्न गण्डकीमा जीवन रक्षा कोषलाई निरन्तरता दिइने
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कोषलाई अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । कोभिडबाट प्रभावित भएका साना तथा मझौला व्यवासायीलाई लक्ष्य गरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्बको कोष स्थापना गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रममा यो कोषलाई निरन्तरता दिइने गरी प्रतिबद्धता आइसकको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयका निर्देशकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा सोमबार उनले भने,‘प्रदेशभित्रका साना तथा मझौला व्यवसायी जो कोभिडबाट प्रभावित भएका छन्, उनीहरुको राहतका लागि यो कार्यक्रम आएको हो, यसले ३ वर्षसम्म निरन्तरता पाउँछ
मुख्यमन्त्री पोखरेलले परम्परागत रुपमा ऋण लिने तरिकामा परिमार्जन गरी सहज बनाउन समेत उनले आग्रह गरे । ससना व्यवसायीलाई लक्ष्य गरिएको कार्यक्रम भएकाले त्यसै अनुसार प्रोत्साहन गर्न गर्न उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन समेत दिए ।
निमित्त प्रमुख सचिव रामचन्द्र ढकालले प्रदेश सरकारले १ अर्ब लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ८ अर्बको हाराहारीमा लगानी हुने भएकाले यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयकी सचिव इन्दु घिमिरेले विषयवस्तुका बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालय निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले सुरुमा कार्यविधिका कारण केही असहज भए पनि अहिले भने प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताए । उनले यो कार्यक्रमका लागि ६ हजार ७ सय ७८ निवेदन परेको र ७ अर्ब ६६ करोड माग भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमध्ये ४ अर्ब ५४ करोडका लागि पूर्व सहमति प्राप्त भइसकेको छ । उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा वार्षिक ६० करोड व्याजमा खर्च हुन्छ र सरकारले छुट्याएको रकमले अहिलेको अवस्थामा डेढ वर्षलाई पुग्छ ।
कोभिड १९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि उत्पादन, तथा सेवा क्षेत्रमा परेको प्रभाव कम गर्न सरकारले जीवन रक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसका लागि ४ शीर्षक बनाएर कर्जा प्रवाह गरिएको छ । न्यूनतम ५० हजार देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको ब्याज प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । कर्जाको अधिकतम अवधि ३ वर्ष तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका निर्देशक भट्टराईले कर्जाका लागि सानो अंक माग गर्नेलाई प्राथमिकमा राखिए पनि अधिकतम अंक माग गर्ने धेरै रहेको बताए । कुल कर्जाको ५० प्रतिशत अर्थात् ५ लाखसम्म माग गर्नेलाई प्रदान गर्ने प्राथमिकता राखिएको उनको भनाइ थियो । बीचको अवधिमा निषेधाज्ञा जारी भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम समेत प्रभावित भएकाले यो कार्यक्रममा पनि असर परेरको बैंकरहरुले बताएका छन् । निषेधाज्ञा पनि खुलेको र अब मालपोत कार्यालय खुलेकाले कर्जा प्रवाहको काम प्रभावकारी रुपमा हुने विश्वास उनीहरुको छ ।
एनआइसी एसिया प्रदेश कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र शर्माले बैंककोे तर्फबाट सरकारलाई सकारात्मक सहयोग नै रहने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘लकडाउने हामीलाई पनि प्रभावित बनायो । ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट काम गराउँदा यो कार्यक्रम स्वभाविक रुपमा प्राथमिकतामा परेको छैन । तर पनि काम भइरहेको छ ।’
राष्ट्र बैंकका निर्देशक भट्टराईले संघ सरकारले लागु गरेको पुनर्कर्जा पनि राम्रैसँग प्रवाह भएको बताए । पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा पुनर्कर्जा गर्न भने समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘पर्यटकीय राजधानी पोखरामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लागनी १७ अर्बमात्र देखिएको छ । व्यवसायका नाममा भन्दा व्यक्तिगत कर्जा बढी देखिन्छ । त्यसको असर पुनर्कर्जामा देखिन्छ ।’ तै पनि यो वर्षमात्रै गण्डकी प्रदेशमा १३ अर्ब पुनर्कर्जा गएको छ । मुलुकभरको १ सय २३ अर्बमध्ये यो रकम निकै उत्साहजनक हो ।
कौरा संरक्षण पत्रकारिता पुरस्कारबाट एमबी आस्था पुरस्कृत
पोखरा । बैंकिङ कसुर मुद्धामा फरार रहेका पोखरा-६ का ४२ बर्षीय खेमराज पौडेल पक्राउ परेका छन् । पौडेललाई साउन १६ गते उनको पोखरा -६ स्थित निजको घरबाटै पक्राउ गरिएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता सुवास हमालले जानकारी दिए । गत वैशाख १५ गते उच्च अदालत हेटौैंडाले पौडेललाई सात दिन कैद सजाय र […]
तुलसी राम सुवेदी बिरगञ्ज । कोरोना भाईरस, कोभिड १९ बाट अग्रपंतीमा रहेर काम गर्ने फोटोग्राफरहरुमा पनि उच्च जोखिम हुन सक्ने भन्दै नेपाल फोटोग्राफर महासंघ नेपालले उच्च जोखिम रहेका १ नं प्रदेश ईटहरी र २ नं प्रदेश बिरगञ्जका फोटोग्राफर बिचमा बृहद अन्र्तकृया सम्पन्न गर्दै संगठन बिस्तार गरेको छ । फोटोग्राफी को अन्र्तकृया संगसंगै सुनसरी फोटोग्राफर संघको […]
पोखरा । नेपाल मगर पत्रकार संघ, कास्कीले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय मौलिक कौरा संरक्षण पत्रकारिता पुरस्कारबाट कास्कीका पत्रकार एमबी आस्था मगर पुरस्कृत भएका छन् । राष्ट्रिय मौलिक कौरा संरक्षण समिति, नेपालद्वारा स्थापित सो पुरस्कारबाट एबीसी न्यूज टेलिभिजनका गण्डकी प्रदेश ब्यूरो प्रमुखसमेत रहेका पत्रकार मगर पुरस्कृत भएका हुन् । मगरलाई गण्डकी प्रदेशका कानून, सञ्चार […]
रासस पोखरा । पोखराबाट नेपालगन्जसम्म सडक मार्गको यात्राका लागि न्यूनतम १४ घण्टा छुट्याउनुपर्छ, त्यो पनि कुनै अवरोध नभएका अवस्थामा । लामो समयदेखि पोखरा–नेपालगञ्ज सिधा हवाई उडान गर्ने चर्चा चलिरहेका बेलामा पोखरालाई आधार बनाएर बुद्ध एयरले आजदेखि पोखरा–नेपालगञ्जको सिधा हवाई उडान भर्न थालेको छ । हवाई उडानबाट ३५ मिनेटमै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । पहिलो चरणमा हप्तामा […]
पत्रकार अधिकारीलाई धम्की दिनेलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्न माग
पोखरा । पोखराका पत्रकार रञ्जन अधिकारीमाथी भएको दुव्र्यबहारप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले एक विज्ञप्ती जारी गरि दोषिलाई कडा कारवाहीको माग गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पूर्व कार्यसमिति सदस्य रञ्जन अधिकारीमाथि भएको घटना स्वतन्त्र प्रेस माथि आक्रमणको घटना भएको जनाएकी छन् । विज्ञप्तिमा उल्लेख छ […]
पोखराबाट केन्पो खुकुरी नेशनल च्याम्पिनसीप प्रतियोगिताको घोषणा
सन्तोष बस्याल पोखरा । पोखराबाट केन्पो खुकुरी नेशनल च्याम्पिनसीप प्रतियोगिताको घोषणा गरिएको छ । शनिबार पत्रकार सम्मलेन गरी सो प्रतियोगिताको घोषणा गरिएको हो । प्रतियोगिता आगामी असोज ८ र ९ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । यसअघि जेठ महिनामा बुटवलमा आयोजना गर्ने भनिएको नेशनल च्याम्पिनसीप कोरोना भाइरस महामारीका कारण स्थगित गरिएको नेपाल केन्पो खुकुरी मार्शल […]
उपभोक्तालाई स्वच्छ पिउनेपानी वितरण गरेरै छाड्छु ःखानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भूपेन्द्र
पोखरा । नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भूपेन्द्र प्रसादले संस्थान बलियो बनाउन आफू क्रियाशील भएको बताएका छन् । नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघ इकाई समिति पोखराद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस तथा खिर खाने पर्वका अवसरमा भएको कार्यक्रममा डा. प्रसादले कर्मचारीको हकहित र उपभोक्तालाई स्वच्छ पिउनेपानी वितरण गरेरै छाड्ने बताए । उनले नेपाल सरकारको नीति, मर्म […]
गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरुले भने :लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छौं
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरुले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति आफूहरु प्रतिबद्ध रहने बताएका छन् । उनीहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप पहिलो प्राथमिकतामा रहेको पनि उल्लेख गरे । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले बुधबार आयोजना गरेको नवनियुक्त मन्त्रीहरुको बधाई तथा परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशका मन्त्रीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । गण्डकीमा आमसञ्चार विधेयक ल्याउनु पूर्व पत्रकारको सुझाव […]
वालिङमा हरित पुनःउत्थान प्रवद्र्धन परियोजना शुरु
तोलाकान्त बगाले वालिङ । सफा तथा स्वच्छ शहरकालागि वालिङ नगरपालिकाभित्रको फोहोरमैला ब्यवस्थापन परियोजना शुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युनएडिपी) र वालिङ नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा दियालो संस्थाको सहजीकरणमा वालिङ प्रोडक्ट होल्डिङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामार्फत हरित पुनःउत्थान प्रवद्र्धन परियोजनाको शुरुआत भएको हो । परियोजनाले विशेष गरी कोभिड १९ बाट प्रभावित भई रोजगारी […]
चन्द्रावती वाग्लेको स्वर, शव्द तथा लय रहेको तीज गीत ” अाउ संगी रमाइलो गराैं वरिलै ” सार्वजनिक
पाेखरा।साहित्यकार ,गीतकार एवं गायिका चन्द्रावती वाग्लेको तीज गीत “अाउ संगी रमाइलो गराैं वरिलै ” २०७८ सार्वजनिक भएको छ।साेमबार महिला मिलन समुहले पाेखरामा अायाेजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सरिता तिम्सिना पगेनीले गीतलाई सार्वजनिक गरेकी हुन्। कार्यक्रममा बाेल्दै पगेनीले विषम अबस्थामा श्रष्टाले सिर्जनाकाे काम गर्नु,माैलिक परम्पराकाे पक्षमा उभिनु असल कार्य […]